I-China yendabuko ye-Classic Brew Beer ye-Mug yaseMelika kunye nabavelisi | UChuancheng
Le seti yeBeer Mugs yenziwa ukusuka kwiglasi eqinile kunye nenqanaba lomgangatho.
Ubunzima obunzima, obunzima bokubanjwa kunye neziphatho ezixhathayo kukuchaphaza ukuphalaza okuncinci. Relax phambi komabonwakude okanye kwitheko kunye nabahlobo kunye nenye yezi mugs zesandla sakho.
Uyilo lweglasi yaseJamani yeklasikhi igcina ibhiya ibanda ngelixa isenza incasa kunye nevumba leenyosi ezinobuninzi kunye neelitha.
Ukulingana ngokugqibeleleyo kunye nomgangatho ongezantsi wokumelana nokuchithwa kunye nokuchitheka, okubonakalayo kuyilo lwakudala ekulula ukulubamba kwaye lomelele ngokwaneleyo ukubanda kwifriza - ezi mugs ziya kugcina isiselo sakho sibanda kude kube shushu lokugqibela.
Iglasi yeBhiya enkulu - I twist yangoku kwisitayile sejamani saseJamani esiya kongeza isinciphiso kunye nesitayile se-dapper kumava akho okusela ebhiya; ikulungele ikofu, iti kunye nezinye iziselo.
Amanqaku-Isiphatho seglasi setanki enkulu yenza kube lula ukubamba i-mug kunye nokonwabela iziselo ixesha elide; ubungakanani bayo obukhulu be-17.25-ounce buvumela ukuba ukonwabele ngakumbi ibhiya oyithandayo ngexesha elinye; ezantsi enzima yongeza uzinzo kunye nokuziva okunethezeka kwi-stein.
Iglasi yeNtaliyane esemgangathweni-Yenziwe e-Itali ngabaphathi begilasi abanobuchule abazinikeleyo ekwakheni ingqokelela ekumgangatho ophezulu, engakhokhelwa, engagungqi; Ezi tanki zibonisa indawo esemagqabini enokususwa kweglasi.
Ukusetyenziswa okuSesikweni nangokuqhelekileyo- I-zethu Stein zebhiya zilungile ukuba zisetyenziswe ngawo onke amaxesha; Nokuba kukwindawo yokuphekela eqhelekileyo ukubukela umdlalo webhola ekhatywayo weCawe okanye imibhiyozo yeqela labathengi, le mibhiyozo ye-mugs ilungile kuwo nawuphi na umcimbi.
Imiyalelo yoKhathalelo-Iiglasi zethu zomsebenzi onzima ziyahlanjwa lula kwaye isitya sisitya sikhuselekile ngaphandle kokungabinakho ukonakala, ukuhlamba kunye nemijikelezo eyomileyo.
Edlulileyo: Ixabiso leGlasi yeTywala yeTerile yeThs
Okulandelayo: Iglasi yeBhiya
ICarlsberg Beer Can
Iglasi yeBhele yeCarlsberg
ICarlsberg Beer tower
Ibhotile yanamhlanje yeBhiya
I-swing Top Beer Bottle
Iglasi yeebhiya ezizodwa
Ixabiso leGlasi yeTywala yeTerile yeThs